Forum serasera malagasy Ny tononkalo tamin'ny andron-dry Dox sy Ny Avana ... - Dinika forum.serasera.org
Ny tononkalo tamin'ny andron-dry Dox sy Ny Avana ...
Fitohizan'ny hafatra : Ny tononkalo tamin'ny andron-dry Dox sy Ny Avana ...
betroka - 30/01/2008 23:05
Tsy mena mitaha amin'ny tononkalon-dry Dox sy Ny Avana ve ny antsika amin'izao fotoana izao ?
pissoa - 03/02/2008 17:33
Tsia - :-D:-D:-D
penina - 03/02/2008 19:12
ao amin'ny CCAC misy boky mirakitra ny tonokalon'i Ny Avana.
betroka - 04/02/2008 19:04
Tsy azoko ny tenin'i Pissoa. Ary aza ihomezana moa ê ! Tsara anarana i Penina
pissoa - 04/02/2008 20:46
Tsy mena-mitaha amin'ny mpanoratra taloha ny mpanoratra amin'izao ! Izay no tiako nambara. :-D:-D:-D
Samy manana ny mahaizy azy ny mpanoratra amin'izao sy tamin'izany. Heveriko fa na taloha na amin'izao dia samy misy asa-soratra tsara, ary misy asa-soratra tsy tsara (araka ny mpitsara) ! Samy misy mpanoratra nalaza, ary misy mpanoratra tsy malaza sns.
Ny tononkalo koa amin'ny lafiny iray dia mitovy amin'ny zava-kanto rehetra ihany. Misy ohatra ny olona tia Michael Buble be, fa tsy tia Shout Out Louds ! Izany hoe na samy manana ny lazany aza i Rado sy JJ Rabearivelo dia mety hisy olona hankafy Rado satria izy tena mahay miantsa fitiavana an-tononkalo, nefa tsy hankafy (na hankahala) an'i Rabearivelo satria misy tandindona alahelo ny tononkalony maro ! Dia toy izany koa ny taloha sy ny ankehitriny. Mety amin'ny hevitra mihitsy koa no hitsarana ilay tononkalo fa tsy ny endrika fotsiny, ary tsy afaka hitovy mihitsy ny fihevitra tamin'ny andro taloha sy ny andro ankehitriny.
Etsetra ... etsetra ! :-D:-D:-D
ANARIM - 05/02/2008 06:35
:D sakamalaho sy avozo ka samy manana ny hanitra ho azy e!
betroka - 05/02/2008 22:56
Samy marina ny an'i pissoa sy Anarim. Fa izao kosa, ahoana ny fahitanareo ny toeran'ny tononkalo ankehitriny raha ampitahaina amin'ny kolo hafa (hira sy mozika, sarimihetsika ...) ?
pissoa - 06/02/2008 16:45
Ny tononkalo amin'izao fotoana izao ...
Manana toerana tsara ny tononkalo amin'izao fotoana izao. Hita any an-gazety. Misy ny radio manana fandaharana hamakiana tononkalo (Onjan'ny Fo ao amin'ny RDB). Manerana ny aterineto izy. Amin'ny raharaham-pianankaviana koa matetika dia misy tononkalo. Eny anivon'ny hira eny moa indraindra indrindra (fa hadino indraindray io tononkalo ao amin'ny hira io fa lasa hoe manjakely Francia sisa ny resaka :-D:-D:-D)
Tsy ny toerana ahitana ny tononkalo ihany no betsaka, fa ny zavatra entiny koa. Maro ny tononkalo miresaka raharaham-pirenena amin'izao, tontolo iainana, fitiavana, fiainana ankapobeny, firariana soa, fanambadiana sns.
Izaho tsy miteny hoe tsy mila ezaka intsony a. Hoy fotsiny aho hoe tsy mena-mitaha izany kosa e. :-D
penina - 06/02/2008 16:54
i pissoa ohatra izao ilay avozo tiana tenenina eto. :-D
pissoa - 06/02/2008 17:10
Inona zany avozo ?
betroka - 06/02/2008 22:25
"Sakamalaho sy avozo ka samy manana ny hanitra ho azy". Betsaka tamin'ireo poeta taloha no olona notsongonolom-bolo. Ohatra i Dox (akademisiana), JJ Rabearivelo (nampitondraina ny anarany ny Lycée lehibe ao Antananarivo), Ny Avana (mpitolona), Jean Narivony (mpampianatra sy mpanabe malaza). Ny poeta ankehitriny anefa dia eo ho eo ihany afa-tsy Rado na olona ankavitsiana. Jereo tsara fa ny mpihira no tena tsongonolom-bolo ankehitriny raha mpanankanto no resahana. Ohatra : Mahaleo, Bodo sy Poopy, Rossy, Jérome Randria, Tianjama, Clos Mahajanga, Rainindimby sns.
Ny fahazoako azy dia tsy lamaody intsony ny tononkalo amin'izao fotoana izao. Ny kabary aza no hita fa mahaliana ny olona tato ho ato.
pissoa - 07/02/2008 18:56
Mba tiako ho azo ny famaritanao ny hoe "betsaka" sy ny hoe "ankavitsiana". Raha mamaky ny liteoratiora malagasy mantsy, dia mielanelana efa ho 43 taona be izao ny nahafatesan'ireo mpanoratra nosokajianao hoe taloha ireo ! nefa dia poeta 4 monja no hitanao notanisaina. Tsy dia hitako ny tsy hitovian'ilay hoe betsaka amin'ny ankavitsiana eto.
Raha ny hira ho hampitahanao ny tononkalo dia heveriko fa mampitovy ny lakana aman-jahatra ianao. Ny hira mantsy, ankoatra ny tononkalo ao anatiny, dia misy mozika koa. Izany hoe kanto roa no ao, ka raha tsy mahatoraka ny tononkalo ny lazany dia tokony misy fanontaniana apetraka.
Ny kabary ... mahaliana an'iza hono ? Misy porofo mivaingana be eto amin'ny serasera fa tsy mahaliana an'iza ny kabary ! Ampitahao ny fahavitrihan'ny dinika mikasika ny Vetso sy ny Fianarana Kabary. Raha tsy diso aho dia 55 monja ny olona mankao amin'ny dinika Fianaraka Kabary. Dia firy no mba nanontany hoe misy dinika kabary ve ? Ianao ve mahafantatra fa misy an'io dinika io eto, dia efa nanontany ve ?
penina - 08/02/2008 18:04
tsy mbola nahita aho fa ny fahalalako azy ohatra ny sakamalao ihany ny paoziny
pissoa - 08/02/2008 19:13
mananihany aho fa havozo ilay manitra fa tsy avozo :oops:
penina - 08/02/2008 20:52
avozo no tianay koa!!!
zamanoro - 09/02/2008 04:24
hazo le avozo eh
betroka - 10/02/2008 20:01
Azafady indrindra re ry pissoa raha nahatezitra anao ny firesako. Fantatro fa poeta vao misondrotra ianao ary anisan'ny ankafiziko ny asa soratrao.
Ny kabary dia mahaliana ny olona maro ary tsy afa misaraka amin'ny fiainan'olombelona : fanambadiana, fahafatesana, fety sy lanonana, hira gasy, politika sns. Misy amin'ireo poeta aza mamolaka ny fahaizana mikabary : Rado (poeta zokiny), Hajaina (poeta zandriny)...
Ankoatra izay dia anisan'ny malahelo aho nohon'ny mahalatsa-danja ny tononkalo amin'izao fotoana izao raha mitaha amin'ny an'ny teo aloha. Jereo fotsiny anie eto amin'ny serasera fa ny fivavahana no lohahevitra ahitana hevitra betsaka indrindra (isaorana ny Tompo) ary ny vetso serasera no vitsy indrindra (tsy miresaka ny lohahevitra manokana aho).
Farany, 4 ny santionan'ny poeta voatonoko satria ireo aloha no tonga tato antsaiko fa azo ampianao an'i Eliza Freda, Fredy Rajaofera, Randza Zanamihoatra, Randzavola, Samuel Ratany, Roldlish sns izay samy olo-mangam-pirenena avokoa.
Ary mahafantatra poeta zandriny ve ianao ka olomangam-pirenena amin'izao fotoana izao ?
pissoa - 10/02/2008 22:13
Citation Azafady indrindra re ry pissoa raha nahatezitra anao ny firesako. Fantatro fa poeta vao misondrotra ianao ary anisan'ny ankafiziko ny asa soratrao.
:-D:-D:-D Fa tezitra angaha aho ? Aza matahotra fa mahay mampiasa sora-baventy sy :twisted: aho rehefa tezitra ka.
Lafiny kabary sy tononkalo
Maninona no tsy resahina ny dinika manokana ? Satria ve manaporofo fa tsy mahaliana ny olona amin'izao ny kabary ? Ny maha tsy dinika ankapobeny fa manokana ny kabary dia efa hahatarafana izany nefa. Averiko indray ny fanontaniako : Firy no mba nanontany misy dinika kabary ve ? ... Mbola azontsika ampiana aza hoe raha tena mahaliana tokoa izy, firy ny mba nangataka tamin'ny admin hoe azo atao dinika ankapobeny koa ny kabary fa tsy manokana ?
Citation Ny kabary dia mahaliana ny olona maro ary tsy afa misaraka amin'ny fiainan'olombelona : fanambadiana, fahafatesana, fety sy lanonana, hira gasy, politika sns.
Izaho mahita hoe "voatery" mihaino kabary ny olona satria tsy afaka misaraka amin'ny fiainany io, araka ny voalazanao ihany, fa tsy hoe liana.
Mikasika ny poeta sy ny kabary ... Ahoana kay ny hamaritana hoe "poeta mahay mikabary" ny olona iray, fa tsy "mpikabary mahay manoratra tononkalo" rehefa samy hainy ireo taranja roa ireo ? :-D:-D:-D
Ny lafiny taloha sy ankehitriny
Hi hi, nitombo tokoa ny lisitry ny poeta fahiny nomenao, fa betsaka ve rehefa oharina amin'ny isan'ny amin'izao ? Na dia tsy mitolona ho amin'ny fahaleovantena intsony aza ny malagasy, ary tsy ho voatahiry amin'ny tantaram-pirenena ny anarany ... dia mbola manoratra - manoratra hatrany. Amiko mantsy dia io koa no isan'ny mampanan-danja ny tononkalo taloha. Izy nifantoka bebe kokoa tamin'ny fahaleovantena, ny fiarovana ny mahamalagasy, ny fitiavan-tanindrazana sns ary tsy azontsika hadinoaina izany. Mazava ho azy, tsy hanana ny toeran'ireny tononkalo ireny ny tononkalo ankehitriny izay maro ny mifantoka amin'ny "fitiavana - olon-droa". Fa izany akory tsy midika hoe tokony ho mena-mitaha ny tononkalo amin'izao fotoana izao.
Eo amin'ny faliny fampiratiana ny tononkalo indray, dia mety heverina fa fahombiazana koa ny firaiketana ny tononkalo taloha amin'ny boky isan-karazany. Amin'izao mantsy tsy dia izay loatra intsony ny mahamaika. Ny aterineto izao no mirakitra tononkalo maro kokoa noho ny boky. Amiko manokana dia taratry ny fahalinan'ny olona amin'ny tononkalo koa ny fiezahana mampanaraka ny tononkalo amin'ny rivotra entin'ny teknolojia.
Fehiny : betsaka ny tsy hitovian'ny tononkalo amin'izao sy ny taloha, na ny hevitra sy ny zava-misy, na ny endriny, na ny fampiratiana azy sns. Betsaka ny mila fanitsiana ny tononkalo amin'izao, indrindra amin'ny tsipelin-teny, noho ny fahaizan'ny Malagasy maro miteny/manoratra ny tenintsika intsony. Saingy na taloha na amin'izao dia samy misy tononkalo tena tsara, tena tsara daholo.
Ialana tsiny fa somary lava. Izay koa angamba no farany handraisako anjara amin'ity dinika iray ity fa toa efa in-2 sahady no lasa resaka Pissoa ilay izy, nefa izaho mba miezaka manazava ny fahitako ny tononkalo amin'izao fotsiny - tsy miankina amin'ny fitiavako sy ny fiezahako hanoratra sns. :oops::-D:-D:-D
voniala - 11/02/2008 09:05
HAVOZO no tena izy ry pissoa a!voninkazo maniry manitra izy io;Manitra ny sakamalaho fa mbola manentoento koa ny HAVOZO
Ny tena tsara isika mpanoraratra ankihitriny koa tokony hanana ny maha izy antsika satria ny teny mety hisy voavoa ka noho izany tokony hisy vaovao koa ny tononkalo
betroka - 11/02/2008 19:27
Aza maika miala aloha ianao ry pissoa fa mbola ilaina. Tsy novalianao ilay fanontaniana hoe "iza amin'ny poeta ankehitriny àry no olo-mangam-pirenena na mety ho lasa toy izany ?" Ary mba asio endrika sariaka moa fa aza mivanitikitika toy izao.